Jechoota Dr. Abiyyi waltajjiwwan addaddarraatti dubbatan keessaa
Jechoota Dr. Abiyyi waltajjiwwan addaddarraatti dubbatan keessaa Featured
- “Namoonni baratan, barnootasaanii hojii qabatamaa keessa galchuudhaan jiruufi jireenya sabasaaniifi ummatasaanii jijjiiruuf, biyyasaanii guddisuuf, addunyaa kanaaf waan haaraa burqisiisuuf ittigargaaramuu qabu.”
- “Taayitaan nideema, nidhufa. Waggaa darbe namoonni as taa'anii waltajjii gaggeessaa turan namoota biraa turan. Isaan har'a asirra hinjira. Warri har'a as taa'aa jiranis bor as hinjiran. Wanti hubatamuu qabu dubbiin waa'ee taayitaatiif walqooduu osoo hintaane tokkummaa dhugaarratti hundaa'e, saba guddaa kana guyya guyyaan qaanessaa jiru keessaa ba'uudha.
Tokko taanee qabsaa'uun jijjiirama meeqa fiduu osoo dandeenyuu qaamaan osoo hintaane ilaalchaan bittinaa'uu keenyaan rakkoolee baay'een ummata kanarratti gahaa turaniiru. Ummanni kun kana keessaa ba'uu qaba ykn dhiisuu qaba. As teenyee ummatarratti qoosaa jiraachuun hindanda'amu.”
- “Irra deeddeebinee dubbachuudhaan qofa osoo hintaane, rakkoo kana keessaa maaltu nu baasuu danda'a, kana keessaa baanees furmaata dhalootaaf waan gaarii dhiisuu danda'u akkamittiin kaa'uu dandeenya kan jedhu gaggeessitoonni siyaasaa irratti mar'iachuu, hamma danda'ameen kallattii bilchaataa, kan fagoo deemuu danda'u kaa'uun hojiisaanii ta'a jechuudha.
Kanaaf rakkoo amma jiru akka carraa guddaatti fudhanna. Itti qoramaa jirra; ittiinis qaramaa jirra. Keessaa barumsa guddaa argannee ofiifi ollaa ilaaluuf, akka itti waliin jiraachuun danda'amu adda baasuuf humna guddaa nuu ta'aa jira jechuudha. ”
- “Wanti jala muramuu qabu filannoo lama hinqabnu; filannoon qabnu walitti ida'amuu, qofa. Filannoon qabnu tokkoomuu, walgargaaruu qofa osoo hintaane wajjin jiraachuuf walitti ida'amuudha. Tokkoon keenya kan biraatiif madaa walii qoorsaafi walii dhukkubsachaa akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna kan jedhuudha yaadni koo”
- “Guddina magaalaatti hedduu gammadna. Guddinni garuu guddina hawaasa buqqisu, guddina namoota dhiibu osoo hinta'iin, guddina hawaasa hammate, walitti qabee akkasumas jiruufi jireenya hawaasaa jijjiiree argamu yoo ta'e namatti tola.”
- “Kaayyoon qabsoo keenyaa jiruufi jireenya jijjiruudha. Kanaaf immoo ka'umsi keenya qonna; qabeenyi keenyammoo lafa. Waggoota sagal, kudhan darbaniif qonnaan bulaan keenya kallattiifi seeraan ala lafasaa dhabee, haqni jallatee rakkoo guddaa keessa akka ture ni beekama.
Haa ta'u malee, haaromsa keenyaan dubbii ijoo ilaallu tokko keessaa bakka keenya duriitti haa deebinu, qabsoon keenya inni ganamaa dagatamaa jira, qonnaan bulaa daganneerra, gaaffii ummataa daganneerraa, ummanni garmalee bo'aa jira, bo'ichisaa kunimmoo hiikamuu kan danda'u dhaabasaatiini. Ijoolleen isaa qabsaa'uun isaanii gaafii sabaa hindeebisu taanaan qabsoon kun galma ga'aa hinjiru.”
- “Hayyoonni keenya bira taa'aanii komachuu dhiisanii, galanii qorachuudhaan gaggeessitoota amma qabatamaatti gaggeessaa jiran beekumsaan garagaaruu qabu. Rakkoon ummataa maalinni, akkaataa kamiin furamuu danda'a, furmaata sanaaf ammoo ga'een mootummaa maal ta'uu qaba isa jedhu qoratanii dhiheessinaan isaan gargaaranii hojiitti jijjiiruun ammoo ga'ee namicha achi jiruu ta'a jechuudha.
Akkataa kanaan hayyoota waliin walitti dhufnee mari'annee dubbii hiikuuf hojii guddaan jalqabameera; kun sadarkaa hundatti babal'atee ittifufuu qaba.”
- “Tokkummaan biyya kanaa sakandii tokkoof shakkii keessa galuu hinqabu. Tokkummaan keenya garuu demokraatawaa ta'uu qaba. Walqixxummaa nageenya hunduu abbaa biyyaa ta'ee itti jraatu ta'uu qaba.”
- “Biyyi kun biyya haadhaafi abbaa keenyarraa dhaalle osoo hintaane, biyya ijoollee keenyarraa ergifanneedha. Dhaala gurguruufi geeddaruun ni danda'ama. Ergifannaan garuu wanta miicamee qulqulleeffamee deebifamuudha. Kanaaf biyya kana bareechinee dabarsuu qabna.”
- “Kaayyoon keenya Itoophiyaan Itoophiyaanota hammattee ummanni hunduu nagaan ba'ee itti galu akka taatuuf tokkoon keenya tokkoo keenyaaf yaaddoo kan walitti taanu osoo hintaane gaachanaafi da'oo ta'uu keenya agarsiisuuf walitti dhufeenya godhamuudha. Kun cimee ittifufa.”
Torban kana/This_Week 11800
Torban darbe/This_Month 91637
Guyyaa mara/All_Days 1603595